Ganacsi teknoolajiyadeed oo fursado shaqo u abuuray dhallinyarada jaamacadaha ka baxay - Radio Ergo
Niman dhalinyaro ah oo baranaya komputer-ka/Kaydka Sawirada/Ergo
(ERGO) – Qaasim Seeraar oo ah 20 jir ku nool magaalada Garowe ayaa soo saaray software xisaabaha ganacsiga loogu talagalay, taas oo uu aaminsan yahay inay saameyn wanaagsan ku yeelan karto bulshada, shaqo-abuurna ay u noqon karto dhallinyarada.
Shirkaddiisa oo lagu magacaabo Hub IT oo uu aasaasay 2019 waxaa ka howlgala 19 dhallinyaro ah oo jaamacado ka soo baxay.
“Teknoolojiyada waxay gashay qof kasta baahidiisa. Waxaan isku dayaa mar kasta inaan dhallinyarada ku dhiirigaliyo in aynaan ka harin waddamada ku hormaray teknoolojiyada,” ayuu yiri Qaasim oo sanadkii 2017 ka baxay kulliyadda cilmiga kumbiyuutarka ee jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso.
Mid ka mid ah waxyaabaha uu ku guuleystay waa inuu sanadkii hore ee 2020 soo-saaray Software far-Soomaali ku qoran oo ganacsatada ka caawinaya inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ganacsigooda, dakhligooda iyo deymaha ka maqan. Barnaamijka oo uu u bixiyay Keydiye ayaa sidoo kale ganacsatada u sahlaya inay qaan-sheegad u diri karaan dadka ay deymaha, iyagoo qoraal xusuusin ah ugu sheegaya inay deymaha iska bixiyaan.
Ganacsatada isticmaaleysa barnaamijka ayaa bil kasta iska bixinaya khidmad si uu ugu sii socdo adeegsiga software-ka.
Isaga iyo dhallinyarada la shaqeysa ayaa beegsanaya inay xalliyaan dhibaatooyinka bulshada ka haysta adeegsiga teknoolajiyada.
Faadumo Maxamed Cali oo ah 23 jir ka qalin-jibisay 2020-kii kulliyadda maamulka guud ee jamacadda Bariga Afrika ee Boosaso waxay ka mid tahay dhallinyarada ka shaqaysa xarunta Hub IT, iyadoo dhanka suuqgeynta kala shaqeysa barnaamijka Keydiye.
Afar bil oo ay la shaqeyneysay shirkadda waxaa lagu abaal-mariyay in mushaarka loo kordhiyo, kaddib markii ay muujisay shaqo-wanaag iyo howlkarnimo, waxayna bishii qaadataa $450. Lacagtaas waxay isaga bixisaa kirada guriga ay deggan tahay. Waxay sidoo kale xustay inay nolol-maalmeedka qoyskeeda ku kabto ayna ay ku bixiso bishii waxabaraashada afar walaalaheeda oo ka yar oo bishii dhan $90.
“Anigu waxaan u arkaa horseedka guulahayga inaan gaaray maaddaama awal aan shaqo-la’aan ahaa. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta shaqeeyo oo familkayga caawiyo,” ayay tiri Faadumo.
Waxay tilmaantay in intii ay jaamacadda dhigaynaysay in ay shaqo-raadis ku jirtay iyadoo dhowr xafiis shaqo ka dalbatay balse aysan ku guuleysan in la qaato. Taasi marnaba ma aysan niyad-jebin maaddaama ay hiigsanaysay inay dhabarka u ridato masuuliyadda waxbarashada walaalaheeda iyo kaalmeynta hooyadeed.
Cabdikhaaliq Maxamed oo isagana ka soo baxay kulliyadda culuumta kumbiyuutarka ee jamacadda Bariga Afrika sanadkii 2020-kii ayaa sheegay la-shaqeyntiisa Hub IT inay kordhisay xiriirradiisa iyo la macaamilkiisa dadka kale.
Wuxuu maalin kasta la kulmaa macaamiil cusub, taas oo qeyb ka ah shaqadiisa oo ah tababarista dadka ku xiran adeegyada shirkadda iyo bixinta caawimaadaha farsamo.
“Marka koowaad xirfad ayaan ka faa’iday waayo tababar ayaa la I siiyay. Tababarkaas ayaan ku shaqeeyaa,” ayuu yiri.